Messi ma'aha hoggaamiye, Neymar ayaana ka wanaagsan!!!
Wednesday, December 12th, 2018 - 09:58:10
Saturday April 01, 2017 - 07:01:47 in Wararka by Muuse Cabdi
Lionel Messi ma aha hoggaamiye wanaagsan, wiilka Brazil ee Neymar ayaana ka ciyaaris wanaagsan, sida uu qabo Argentina tababaraheedii hore ee jirdhiska Carlos Dibos.
Argentina ayaa waxay marxalad adag ka wajaheysaa usoo gudubkeeda koobka Adduunka ee 2018, markii ay khasaare 2-0 ah kala kulantay Bolivia ciyaar ka dhacday La Paz taasoo booska 5-aad ee kala sarreynta Xulalka Koofurta Ameerika ka ridday waxaana u harsan kaliya 4 kulan.
Messi ayaa ganaax 4 kulan ah waxaa garka u gelisay FIFA markii uu caayay una dhaartay Garsoore ciyaartii Chile, waxaana uu ganaaxaas ku maqnaan doonaa waqti dheer, Barcelona wiilkeeda waxaa uu kusoo laaban doonaa ciyaaraha heerka qaran kulanka Ecuador ee October.
Dibos ayaa la su’aalay awoodda Messi ee xulku in ay u dhiganto middii Diego Maradona markii kabtanka looga dhigay xulka.
Wuxuuna u sheegay TyC Sports: "Waxaan u maleynayaa in ay qalad aheyd aadna loogama wadahadlin arrinkan waxaan qabaa in qof kale la doorto, ciyaartoydu shaqsiyad weyn malaha hadda inta ciyaareysa badanaa, dhiirrigelin malahan, Geesi maahan, garbaha kuma qaadi karo saaxiibadiis... waxaad oo dhan wuu lahaa kabtan Diego Armando Maradona.
"Waxaa jirtay in aad loo jeclaa funaanaddiisa, ma qiyaasi kartid in lambarkiisii ayaa la siiyay aad u tiraahdo mooyee wax qabadka labada nin in uu sinnaa. Diego wuxuu degay qalbiga qof walba, xataa aniga, Leo sidaas ma sameyn.
"Taasi lama macno aha. In anigu aan ahay qof neceb Messi waxaa uu ka mid yahay 3-da nin ee ugu fiican kubbadda cagta, balse isagu maahan kan ugu fiican. Maanta, Neymar ayaa ka wanaagsan."
Dibos, oo kala soo shaqeeya dhanka jir dhiska xulka Argentina intii u dhexeysay 2006 ilaa 2008, ayaa ka sheegay Messi.
"Hadda xaqiiqdu waa in uu tagaa, waan la xanuunsaneynaa dhaqanka uu keenay Argentina. Waxaan rabnaa in wax walba kala caddaadaan," Dibos, waa seeddiga Atletico Madrid tababaraheeda Diego Simeone, wuxuu sidaas u sheegay Radio La Red.